January 31, 2018 Rochak Jankaricannot answer, failed, science, truth
१. निद्रा लाग्नु र निद्राका बेला सपना देख्नु हाम्रा लागि सामान्य कुरा हो तर सपना किन देखिन्छ भन्ने कुराको जवाफ विज्ञानसँग पनि छैन । सपनाको बारेमा विभिन्न् मान्यता छन् ।
केहीले हामीले जे कुराको बारेमा सोचेर सुतेका छौं त्यही सपनामा देखिने बताउँछन् । केहीले हाम्रा अनुरा चाहनाहरु सपनामा देखिने बताउँछन् भने धार्मिक मान्यताअनुसार सपनाले जीवनका राम्रा नराम्रा कुराहरुको संकेत दिन्छन् । तर यी कुनै मान्यता पनि पुष्टि भएका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जुकरबर्गको एक स्ट्याटसले फेसबुक लाइ ३० लाख डलर भन्दा धेरै घाटा
यो पनि पढ्नुहोस् : कहिल्यै दुर्घटना नहुने दाबीका साथ् BMW ले ल्यायो नयाँ मोटरसाइकल !
यो पनि पढ्नुहोस् : बन्यो महिलालाई बलात्कारबाट बचाउने अन्डरवयर